Nintendo anotsanangura chikonzero chekuunza Animal Crossing uye kwete Mario kune mobile mapuratifomu | IPhone nhau
Vhiki rapfuura takakuzivisa iwe nezvezvirongwa zveNintendo zvenguva yemberi uye zano rayo rekuunza mitambo yakagadzirwa neyakagadzirwa neJapan kumapuratifomu efoni. Iyo mitambo inosarudzwa neiyo yeJapan brand anga ari Animal Kuyambuka uye Moto Emblem. Kuuya kwemitambo iyi pamapuratifomu efoni inhau dzakanaka kune vese vashandisi veaya mafranchise, asi zvakamutsa mibvunzo yakawanda nezvazvo, mibvunzo yakapindurwa nemutungamiri weNintendo pachake.
Vhiki rapfuura iyo kambani yakazivisa mhedzisiro yayo yezvemari yekota yekupedzisira. Pakupera kwemusangano, Mutungamiri weNintendo Tasumi Kimishima akaedza kujekesa chinangwa chekambani kuvhura aya mafranchise uye kwete iwo anga achishandwa nemunhu wese kwemakore, saMario asina kuenda kumberi.
Sekureva kwaTasumi, Animal Crossing uye Moto Emblem vakasarudzwa ku, saMiitomo, wedzera mhando dzakasiyana dzevashandisi vanofarira Nintendo uye nekudaro gadzira mikana mitsva yekutamba. Akaenderera mberi akataura kuti Animal Crossing franchise yasvika vateveri vazhinji, kusanganisira vana vazhinji nevakadzi. Nenhamba idzi, pane mukana wakanaka kwazvo wekuti vatengi vatsva verudzi urwu rwemutambo vachada kunakirwa nekuyambuka kweMhuka.
Muchidimbu, Kuyambuka Kwezvipfuyo isarudzo huru yekutora kune epuratifomu mapuratifomu nekuti ine akasiyana evashandisi. Kune rimwe divi, sarudzo yekutakura Moto Emblem yakaitwa kuwedzera huwandu hwevashandisi veiyi franchise iyo nhasi haina kusangana nezvinotarisirwa nekambani yakanga yaisa pairi.
Parizvino tinoziva zvishoma nezve iyi inotevera mitambo inosvika gore rese ku mafoni mapuratifomu. Hatizive kana zvichizowanikwa nekutenga kwe-mu-app (zvinowanzoitika) kana kana iyo yeJapan femu ikasarudza kupa mubhadharo mumwe chete nekutenga kunyorera nekukanganwa nezve micropayments. Uye hazvizivikanwe kuti kutamba kwaro kuchave sei, kana zvichizofanana neizvo zvecontso consoles kana ichasarudza mhando yeMiitomo. Nguva ichataura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Nintendo anotsanangura chikonzero chekuunza Animal Crossing uye kwete Mario kune epuratifomu mapuratifomu
LG inokwanisa kuwedzera chigunwe chigunwe pachiratidziri